"မဟူရာရုပ်ရှင်ရုံ" ဇာတ်ကားက သွားကြည့်ဖို့ ထိုက်တန်တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားလား ? - For her Myanmar
သတိ … ကြောက်တတ်သူများ မကြည့်ရ
ယောင်းတို့ရေ … ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာ Avengers : End Game နဲ့အတူ လူအများ စိတ်ဝင်စားတာ ခံနေရတဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ “မဟူရာရုပ်ရှင်ရုံ” ပါ။ အမှန်တိုင်းပြောရရင် Stella က သရဲအင်မတန်မှကြောက်သူပါ။ ဒါပေမဲ့ မည်သို့မည်ပုံဖြစ်သွားသည်မသိ … ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ သရဲခြောက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကို ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ ကြည့်ရတော့မယ်လို့ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ တွေ့လိုက်တည်းက Stella ကို ဒီရုပ်ရှင်က ဆွဲဆောင်နိုင်သွားတာပဲ။ ဒီတော့ ရုံတင်တဲ့နေ့မှာပဲ ကြိုတင်လက်မှတ်ဝယ်ပြီး အရဲစွန့်သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့သည်ပေါ့။
ဒါရိုက်တာ ပြည့်ဇော်ဖြိုးက ရိုက်ကူးထားပြီး သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ အကယ်ဒမီ နေတိုး၊ မင်းသွေး၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ Riya Ray နဲ့ နန်းဆုဦးတို့က ပါဝင်ထားပါတယ်။
Related Article >>> သဘာဝတရားကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ လူတွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားစရာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင် (၂)ကား
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဉာဏ်လင်းအောင်၊ ရဲသီဟ၊ ကျော်စွာ နဲ့ ရတီတို့ သူငယ်ချင်းလေးယောက်က သူတို့စီစဉ်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျင်းပဖို့အတွက် မြို့ငယ်လေးတစ်ခုရဲ့အစွန်အဖျားက ရုပ်ရှင်ရုံအဟောင်းကြီးကို ငှားလိုက်မိတာကနေ ဇာတ်လမ်းစပါတယ်။ ဒီရုံအဟောင်းကြီးမှာ ဘယ်လိုသမိုင်းကြောင်းတွေ ရှိခဲ့လဲဆိုတာတော့ လေးယောက်လုံး သတိမပြုမိခဲ့ကြပါဘူး။
ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွက် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးမယ့် NGO အဖွဲ့အစည်းက နိုင်ငံခြားသူ Riya ကလည်း အကူအညီပေးဖို့ဆိုပြီး ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်… မကြာပါဘူး … ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဖြစ်လာပြီး ရုံထဲမှာရှိနေတဲ့ ပရလောကသားတွေ ခြောက်လှန့်တာကို ခံရတော့တာပဲ။
ဒါဆို ရုပ်ရှင်ရုံဟောင်းကြီးမှာ ဘယ်လိုသမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့တာလဲ ?
ဒီငါးယောက်ကကော သွေးပျက်အောင် ခြောက်လှန့်နေတာတွေဆီက လွတ်မြောက်နိုင်မှာလား ?
ပရလောကသားတွေကို ရုံဟောင်းကြီးကနေ ထွက်မသွားအောင် ချုပ်နှောင်ထားတဲ့အရာတွေက ဘာတွေလဲ ?
ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေတွေကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တာ့ “မဟူရာရုပ်ရှင်ရုံ” ဇာတ်ကားကြီးကို အမြန်ဆုံးသွားကြည့်လိုက်ပါလို့..
Stella ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် အရင်ဆုံးသတိထားမိတာက ရုံထဲမှာ နေရာလပ်မကျန်အောင် လူအပြည့်ဖြစ်နေခြင်းပါပဲ။
ရုပ်ရှင်ကြည့်တော့လည်း ရုပ်ရှင်ရဲ့ကွာလတီ၊ အသံစနစ်တွေက ကျေနပ်စရာပါ။
သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့လည်း ဟာကွက်မရှိသရုပ်ဆောင်ထားနိုင်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ မင်းသွေးရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေ တွေ့တော့လည်း နှမြောတသဖြစ်ရသေးတယ် :'(
သရဲခြောက်တဲ့အခန်းတော့ Stella က တစိမ်စိမ့်ခြောက်မယ်ထင်ခဲ့ပေမဲ့ မထင်မှတ်တဲ့နေရာတွေကနေ ဗြူးကနဲဗြဲခနဲပေါ်လာပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းခြောက်တာတွေကြောင့် လက်ထဲကမုန့်ထုတ်လွတ်ကျတဲ့အထိ လန့်ခဲ့ရတာမို့ မပျော်ပါဘူးနော် :’)
“မဟူရာရုပ်ရှင်ရုံ” ဇာတ်ကားက နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှစ်ခုမှာ သွားရောက်ပြသဖို့ ရွေးချယ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါရိုက်တာရော၊ သရုပ်ဆောင်တွေရော၊ ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေပါ တော်တော်လေးကြိုးစားထားမှန်း သိသာတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားမို့ Stella ကတော့ သွားကြည့်သင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…
သတိ … ကွောကျတတျသူမြား မကွညျ့ရ
ယောငျးတို့ရေ … ဒီတဈပတျထဲမှာ Avengers : End Game နဲ့အတူ လူအမြား စိတျဝငျစားတာ ခံနရေတဲ့ မွနျမာရုပျရှငျကားတဈကားရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ “မဟူရာရုပျရှငျရုံ” ပါ။ အမှနျတိုငျးပွောရရငျ Stella က သရဲအငျမတနျမှကွောကျသူပါ။ ဒါပမေဲ့ မညျသို့မညျပုံဖွဈသှားသညျမသိ … ရုပျရှငျရုံထဲမှာ သရဲခွောကျတဲ့အဖွဈအပကျြကို ရုပျရှငျရုံထဲမှာ ကွညျ့ရတော့မယျလို့ ဖဘေု့တျပျေါမှာ တှလေို့ကျတညျးက Stella ကို ဒီရုပျရှငျက ဆှဲဆောငျနိုငျသှားတာပဲ။ ဒီတော့ ရုံတငျတဲ့နမှေ့ာပဲ ကွိုတငျလကျမှတျဝယျပွီး အရဲစှနျ့သှားကွညျ့ဖွဈခဲ့သညျပေါ့။
ဒါရိုကျတာ ပွညျ့ဇျောဖွိုးက ရိုကျကူးထားပွီး သရုပျဆောငျတှအေနနေဲ့ အကယျဒမီ နတေိုး၊ မငျးသှေး၊ ကြျောကြျောဗိုလျ၊ Riya Ray နဲ့ နနျးဆုဦးတို့က ပါဝငျထားပါတယျ။
Related Article >>> သဘာဝတရားကို ဆနျ့ကငျြနတေဲ့ ဖွဈစဉျနဲ့ လူတှအေကွောငျး စိတျဝငျစားစရာ ရိုကျကူးထားတဲ့ ရုပျရှငျ (၂)ကား
ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ဉာဏျလငျးအောငျ၊ ရဲသီဟ၊ ကြျောစှာ နဲ့ ရတီတို့ သူငယျခငျြးလေးယောကျက သူတို့စီစဉျထားတဲ့ ရုပျရှငျပှဲတျောကငျြးပဖို့အတှကျ မွို့ငယျလေးတဈခုရဲ့အစှနျအဖြားက ရုပျရှငျရုံအဟောငျးကွီးကို ငှားလိုကျမိတာကနေ ဇာတျလမျးစပါတယျ။ ဒီရုံအဟောငျးကွီးမှာ ဘယျလိုသမိုငျးကွောငျးတှေ ရှိခဲ့လဲဆိုတာတော့ လေးယောကျလုံး သတိမပွုမိခဲ့ကွပါဘူး။
ရုပျရှငျပှဲတျောအတှကျ ရနျပုံငှထေောကျပံ့ပေးမယျ့ NGO အဖှဲ့အစညျးက နိုငျငံခွားသူ Riya ကလညျး အကူအညီပေးဖို့ဆိုပွီး ရောကျလာပွီးတဲ့နောကျ… မကွာပါဘူး … ထူးဆနျးတဲ့အဖွဈအပကျြတှေ ဆကျတိုကျဆိုသလို ဖွဈလာပွီး ရုံထဲမှာရှိနတေဲ့ ပရလောကသားတှေ ခွောကျလှနျ့တာကို ခံရတော့တာပဲ။
ဒါဆို ရုပျရှငျရုံဟောငျးကွီးမှာ ဘယျလိုသမိုငျးကွောငျးတှရှေိခဲ့တာလဲ ?
ဒီငါးယောကျကကော သှေးပကျြအောငျ ခွောကျလှနျ့နတောတှဆေီက လှတျမွောကျနိုငျမှာလား ?
ပရလောကသားတှကေို ရုံဟောငျးကွီးကနေ ထှကျမသှားအောငျ ခြုပျနှောငျထားတဲ့အရာတှကေ ဘာတှလေဲ ?
ဒီမေးခှနျးတှရေဲ့ အဖွတှေကေို သိခငျြတယျဆိုရငျတာ့ “မဟူရာရုပျရှငျရုံ” ဇာတျကားကွီးကို အမွနျဆုံးသှားကွညျ့လိုကျပါလို့..
Stella ရဲ့ အတှအေ့ကွုံကို ပွောရမယျဆိုရငျတော့ဖွငျ့ အရငျဆုံးသတိထားမိတာက ရုံထဲမှာ နရောလပျမကနျြအောငျ လူအပွညျ့ဖွဈနခွေငျးပါပဲ။
ရုပျရှငျကွညျ့တော့လညျး ရုပျရှငျရဲ့ကှာလတီ၊ အသံစနဈတှကေ ကနြေပျစရာပါ။
သရုပျဆောငျတှအေနနေဲ့လညျး ဟာကှကျမရှိသရုပျဆောငျထားနိုငျတယျလို့ မွငျပါတယျ။ မငျးသှေးရဲ့ သရုပျဆောငျခကျြလေးတှေ တှတေ့ော့လညျး နှမွောတသဖွဈရသေးတယျ :'(
သရဲခွောကျတဲ့အခနျးတော့ Stella က တစိမျစိမျ့ခွောကျမယျထငျခဲ့ပမေဲ့ မထငျမှတျတဲ့နရောတှကေနေ ဗွူးကနဲဗွဲခနဲပျေါလာပွီး ခပျကွမျးကွမျးခွောကျတာတှကွေောငျ့ လကျထဲကမုနျ့ထုတျလှတျကတြဲ့အထိ လနျ့ခဲ့ရတာမို့ မပြျောပါဘူးနျော :’)
“မဟူရာရုပျရှငျရုံ” ဇာတျကားက နိုငျငံတကာရုပျရှငျပှဲတျောနှဈခုမှာ သှားရောကျပွသဖို့ ရှေးခယျြခွငျးခံထားရတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါရိုကျတာရော၊ သရုပျဆောငျတှရေော၊ ရုပျရှငျအဖှဲ့သားတှပေါ တျောတျောလေးကွိုးစားထားမှနျး သိသာတဲ့ ရုပျရှငျကားတဈကားမို့ Stella ကတော့ သှားကွညျ့သငျ့တယျလို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ ယောငျးတို့ရေ…
Tags: Horror, international film festival, Movie review, Myanmar Movie, new, production, the dark cinema